ဘာကွောငျ့လဲ ….ဒီမေးခှနျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျနှခါမြား နာကငျြစခေဲ့ပွီးပွီလဲ – Shinyoon
ဘာကွောငျ့လဲ ….ဒီမေးခှနျးနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို ဘယျနှခါမြား နာကငျြစခေဲ့ပွီးပွီလဲ ။
တဈယောကျယောကျက ကိုယျ့ကို ထားသှားတဲ့အခါ ငါ့မှာ ဘာမြားအပွဈရှိလို့လဲ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ပဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈတငျတတျကွတယျ ။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သိမျငယျတတျကွတယျ ။ တဈဖကျက မကောငျးတာကို ကြှနျမတို့မွငျအောငျ မကွညျ့တတျခဲ့ကွဘူး ခဈြတဲ့စိတျတဈခုနဲ့ ဖုံးထားဖိထားကွတာလေ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့မေးခှနျးတှနေဲ့ပဲ နရေ့ော ညရော နှိပျစကျနမေိတတျတာ ။
တဈယောကျယောကျက မကောငျးမွငျတဲ့အခါ … ကိုယျကောငျးအောငျနနေပေါရဲ့နဲ့ ဘာကွောငျ့မြား မကောငျးပဲထငျနတောလဲဆိုပွီး တှေးပွီး ၀မျးနညျးနတေတျကွတယျ ။ အမှနျက … ကိုယျကောငျးအောငျနနေရေငျ မကောငျးမွငျတဲ့လူကို လဈြလြူရှုပဈလိုကျသငျ့တာ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ ကိုယျလြှောကျနတေဲ့လမျးမှာ တှဝေမေနသေငျ့ဘူး ။
ဘာကွောငျ့လဲ ….အဲ့ဒီမေးခှနျးမှာ တဈခါတဈရံ အဖွတှေမေရှိတတျဘူး အပငျပနျးခံပွီးရှာမနနေဲ့ ။ မကောငျးထငျနတေဲ့သူက ကိုယျဘာပဲလုပျလုပျ မကောငျးမွငျနမှောပါပဲ ။ တဈလောကလုံးက ထောကျခံရငျတောငျ အမွငျမကွညျတဲ့သူတဈယောကျက ကိုယျ့ကို ဆနျ့ကငျြလိမျ့မယျ ။ ဒါ သဘာဝတရားပဲ လကျသငျ့ခံနိုငျဖို့လိုတယျ ။
ကိုယျဘယျလောကျပဲ ခဈြခဈြပါ ။ တနျဖိုးမသိတဲ့သူကတော့ တနျဖျိုးမထားတတျတာ သဘာဝပဲ အဲ့ဒီသဘာဝကို ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့မေးခှနျးတှေ ထုတျပွီး အဖွမေရှိတဲ့ ပုစ်ဆာတှမှော ခေါငျးတိုးပွီး အဖွတှေရှောမနနေဲ့တော့ ။ မခဈြတဲ့သူကတော့ မခဈြတာပါပဲ ဒါကို လကျသငျ့ခံဖို့ပဲ ကွိုးစားပါ ။
ဒီနကေ့စပွီး …. ဘာပဲဖွဈလာဖွဈလာ …ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့မေးခှနျးတှေ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျမေးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈတှေ တငျမနနေဲ့တော့ ။ ဘာကွောငျ့လဲ တှေးပွီး အိပျရေးတှေ အပကျြမခံနဲ့တော့ ။
တခြို့အဖွဈအပကျြတှကေ ဖွဈခြိနျတနျလို့ ဖွဈသှားတာ ဖွဈရမယျ့ကံပါလို့ ဖွဈသှားတာ ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှေ​ကွောငျ့ အဖွရေလာမှာမဟုတျဘူး ။ ကိုယျပဲ ပငျပနျးရလိမျ့မယျ ။
ဘာကြောင့်လဲ ….ဒီမေးခွန်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်နှခါများ နာကျင်စေခဲ့ပြီးပြီလဲ ။
တစ်ယောက်ယောက်က ကိုယ့်ကို ထားသွားတဲ့အခါ ငါ့မှာ ဘာများအပြစ်ရှိလို့လဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်တတ်ကြတယ် ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိမ်ငယ်တတ်ကြတယ် ။ တစ်ဖက်က မကောင်းတာကို ကျွန်မတို့မြင်အောင် မကြည့်တတ်ခဲ့ကြဘူး ချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ ဖုံးထားဖိထားကြတာလေ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပဲ နေ့ရော ညရော နှိပ်စက်နေမိတတ်တာ ။
တစ်ယောက်ယောက်က မကောင်းမြင်တဲ့အခါ … ကိုယ်ကောင်းအောင်နေနေပါရဲ့နဲ့ ဘာကြောင့်များ မကောင်းပဲထင်နေတာလဲဆိုပြီး တွေးပြီး ၀မ်းနည်းနေတတ်ကြတယ် ။ အမှန်က … ကိုယ်ကောင်းအောင်နေနေရင် မကောင်းမြင်တဲ့လူကို လျစ်လျူရှုပစ်လိုက်သင့်တာ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့လမ်းမှာ တွေဝေမနေသင့်ဘူး ။
ဘာကြောင့်လဲ ….အဲ့ဒီမေးခွန်းမှာ တစ်ခါတစ်ရံ အဖြေတွေမရှိတတ်ဘူး အပင်ပန်းခံပြီးရှာမနေနဲ့ ။ မကောင်းထင်နေတဲ့သူက ကိုယ်ဘာပဲလုပ်လုပ် မကောင်းမြင်နေမှာပါပဲ ။ တစ်လောကလုံးက ထောက်ခံရင်တောင် အမြင်မကြည်တဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ့်ကို ဆန့်ကျင်လိမ့်မယ် ။ ဒါ သဘာဝတရားပဲ လက်သင့်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ် ။
ကိုယ်ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ်ပါ ။ တန်ဖိုးမသိတဲ့သူကတော့ တန်ဖ်ိုးမထားတတ်တာ သဘာဝပဲ အဲ့ဒီသဘာဝကို ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ ထုတ်ပြီး အဖြေမရှိတဲ့ ပုစ္ဆာတွေမှာ ခေါင်းတိုးပြီး အဖြေတွေရှာမနေနဲ့တော့ ။ မချစ်တဲ့သူကတော့ မချစ်တာပါပဲ ဒါကို လက်သင့်ခံဖို့ပဲ ကြိုးစားပါ ။
ဒီနေ့ကစပြီး …. ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာ …ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တွေ တင်မနေနဲ့တော့ ။ ဘာကြောင့်လဲ တွေးပြီး အိပ်ရေးတွေ အပျက်မခံနဲ့တော့ ။
တချို့အဖြစ်အပျက်တွေက ဖြစ်ချိန်တန်လို့ ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်ရမယ့်ကံပါလို့ ဖြစ်သွားတာ ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ​ကြောင့် အဖြေရလာမှာမဟုတ်ဘူး ။ ကိုယ်ပဲ ပင်ပန်းရလိမ့်မယ် ။
အဆငျ့အတနျးဆိုတာ တကယျတော့ စိတျဓာတျပဲ